* လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ် + လက်ဗွေ
* စွမ်းရည်- 14"-17" လက်ပ်တော့များ
* အရောင်: အနက်ရောင်
* အပေါက်များ- နောက်ဘက်တွင် အပေါက် ၄ ပေါက်
* အသုံးပြုနိုင်သော မြင်ကွင်း- ဟိုတယ်အခန်း/ ရုံးခန်း/ အိပ်ခန်း/ စာကျက်ခန်း/ ဧည့်ခန်း
မော်ဒယ် ပြင်ပအရွယ်အစား(mm) အထူ(မီလီမီတာ) ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) N.W (ကီလိုဂရမ်)
ဇ ဒဗလျူ ဃ တစ်အိမ် ခန္ဓာ ဇ ဒဗလျူ ဃ
EH-2045-JH ၂၀၀ ၄၂၀ ၃၅၀ ၄ ၂ ၃၀၀ ၅၅၀ ၅၀၀ ၂၁
၁။ အံဝှက်အသေးစား လုံခြုံရေးသေတ္တာ။
၂။ အနက်ရောင် crystal tempered glass ထိတွေ့မျက်နှာပြင်။
၃။ ပိုမိုလုံခြုံရေးအတွက် ခိုင်မာသော တိုက်ရိုက်လော့ခ်ကျသော bolts2ခု။
၄။ override key ပါသော လက်ဗွေ အီလက်ထရွန်းနစ်လော့ခ်သည် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို လုံခြုံစေပါသည်။
၅။ အဆင့်မြင့် အံဆွဲများ လျှောကျနေသည်။
1.Q ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ သင့်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးကို စမ်းသပ်ပါသလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် 100% စမ်းသပ်မှုနှင့် QC စစ်ဆေးခြင်း။ မပို့ဆောင်မီ။
2.Q ထုတ်ကုန်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏လိုဂိုကို ပုံနှိပ်နိုင်ပါသလား။
3.Q ထုတ်ကုန်ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မလား။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ဖက်စလုံးအတွက် အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ချွေတာပြီး သင့်အတွက် အမြင့်ဆုံး အကျိုးခံစားခွင့်များ ဆောင်ကြဉ်းပေးသည့် တင်းကျပ်သော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်း စည်းမျဉ်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲလိုက်နာပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 နိုင်ငံတကာအရည်အသွေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့သည် CE, ROSH, FCC အောင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်။